2019-06-25 16:41:14 ,­(25.6.2019) ကျွန်မတို့ #Count…
­(25.6.2019) ကျွန်မတို့ #Country_Job_Agency တွင် ကုမ္ပဏီကြီးများမှ လက်ရှိလို အပ်သော Position များကို
1. သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ Construction Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Admin­­_Manager M(5)posts
– Salary 400,000~600,000 Ks
– Exp (3)yrs (Admin Field)
– Admin Certificate (or) Diploma
– Age (25~40)yrs
– Site ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
– စိတ်ဝင်စားပါက (25.6.19)ရက် အင်္ဂါနေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် U Kyaw Lin Ph;09-264692405)
2. လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ မီးစက်ကုမ္ပဏီကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Service_Leader M(2)posts
– Salary 350,000~400,000 Ks
– BE/B-Tech/AGTI (MP/EP)
– Age(40) yrs under
– Driver လိုင်စင်ရှိရမည်။
– စနေတစ်ဝက်/ တနင်္ဂနွေပိတ်
– Ferry/ Uniform ရှိ
– စိတ်ဝင်စားပါက (25.6.19)ရက် အင်္ဂါနေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Win Thuzar Ph;09-404777933)
3. တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ FMCG Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Marketing_Executive M(3)posts
– Salary 350000~400000Ks+ Commission
– English Speaking, Computer MS Word, Excel
– Exp (2)yrs above (Marketing Executive, Event Planner Field)
– Age (30~45)yrs
– စိတ်ဝင်စားပါက (25.6.19)ရက် အင်္ဂါနေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် U Nay Zaw Ph; 09-264446081)
4. စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ Car Production Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Sr.Accountant F(5)posts
– Salary 300000~40000Ks
– LCCI Level (III)UK
(2) #Jr.Account F(5)posts
– LCCI Level (II)UK
– စိတ်ဝင်စားပါက (25.6.19)ရက် အင်္ဂါနေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw May Zin Myint Aung Ph; 09-899909969)
5. ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ Engineering Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Site_Engineer M(5)posts
– AGTI, B.Tech, BE (Civil)
6. တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးကုမ္ပဏီတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
– English Speaking ကျွမ်းကျင်
– Exp (1)yrs
(2) #Thai_Translator F(3)posts
– အသက် (35)နှစ်အောက်
7. ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ Japan စာသင်ကျောင်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
– LCCUI Level (III)UK
– Exp (2)yrs (နှစ်ချုပ်လချုပ်ဆွဲနိုင်ရမည်။)
– ဘွဲ့ရ/ Computer Myanmar Font/ English Fontကျွမ်းကျင်
– Japan N3 အောင်မြင်ပြီးသူ
– စနေ နေ့ဝက်/ တနင်္ဂနွေ/ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။
8. ကျိုင်းတုံမြို့နယ်ရှိ Engineering Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
– ဘွဲ့ရ/ LCCI Level (III)UK
9. မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ ရေသန့်စက်ရုံတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #လက်ထောက်ဓါတ်ခွဲမှူး M/F(5) posts
– Salary 300,000~400,000 ks
– Exp (2)yrs (ရေဓါတ်ခွဲအတွေ့အကြုံရှိရမည်)
– Age (40) Under
(2) #Sale_Staff M/F(10) Posts
– Salary 180,000~200,000 Ks
– Exp (2) yrs
– စိတ်ဝင်စားပါက (25.6.19)ရက် အင်္ဂါနေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Yu Yu Ph;09-458315642)
10. သာကေတမြို့နယ်ရှိ Decoration Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Marketing_Supervisor M/F(4)posts
– English4Skills (Intermediate)
– Decoration ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
– Exp (2) yrs above
11. တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Steel Structure Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #QS/ QC Engineer F(10)posts
– Computer MS Word, Excel, Auto CAD (2D,3D), QS Estimating Course, Steel Structure Design
– Age (23~29)yrs
– စိတ်ဝင်စားပါက (25.6.19)ရက် အင်္ဂါနေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Thin Lai Ph; 09-897668884)
12. သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ Travel & Tour Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Senior_Account F(5) posts
– Salary 250,000~350,000 Ks
– LCCI III(UK) လချုပ်နှစ်ချုပ်ဆွဲနိုင်ရမည်။
– Exp (3) yrs
– Age (28) above
– Uniform ရှိ
(2) #လုံခြုံရေး M(5) posts
– Salary 150,000~200,000 Ks
– Age (25) above
– အလုပ်ချိန် Day/ Night အလှည့်ကျတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
– စိတ်ဝင်စားပါက (27.6.19)ရက်ကြာသာပတေးနေ့တွင် အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw May Phoo Ph;09-440544936)
13. ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ Travel & Tour Co.,ltd ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Air_Ticketing M/F(5)posts
– Salary 200,000~300,000 Ks
– 10တန်းအောင် / ဘွဲ့ရ
– Internation System အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
14. အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Sale_&_Marketing_Supervisor F(5) posts
– Sunday / Public Holidays Off
– စိတ်ဝင်စားပါက (25.6.19)ရက် အင်္ဂါနေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Thazin Theint Ph;09-445440153)
15. သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
– စိတ်ဝင်စားပါက (25.6.19)ရက် အင်္ဂါနေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Htoo Thinzar Ph; 09-264446085)
16. ငပလီရှိ Hotel ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Accountant M(5)posts
– LCCI Level (I,II,III)
– စိတ်ဝင်စားပါက (26.6.19)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက် (10)နာရီတွင် အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Htoo Thinzar Ph; 09-264446085)
17. ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ Forklift Sale Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Service_Engineer M(10)posts
– Computer Basic, Auto CAD (2D)
– စနေ/ တနင်္ဂနွေပိတ်သည်။
(2) #Sale_Engineer M/F(10)posts
– Auto CAD, Computer Basic
18. အလုံမြို့နယ်ရှိ Construction Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Mechnical M(5) posts
– Salary 200,000~250,000 Ks
– Age (22~28)yrs
(2) #အထွေထွေလုပ်သား ကျား(5)ဦး
– 9တန်း/ 10တန်း
– စိတ်ဝင်စားပါက (25.6.19)ရက် အင်္ဂါနေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Myo Myo Ph;09-264692102)
19. လှိုင်မြို့နယ်ရှိ Online Shopping Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Junior_Account F(5) posts
– LCCI II(UK)/ Computer Basic
– စိတ်ဝင်စားပါက (25.6.19)ရက် အင်္ဂါနေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Zin Mar Ph;09-424323584)
20. မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ FMCG Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Jr.Account F(5)posts
– Salary 180000~250000Ks
– LCCI Level (I,II), Computer Basic
– တစ်ပတ်တစ်ရက်/ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။
– စိတ်ဝင်စားပါက (25.6.19)ရက် အင်္ဂါနေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Zin Mar Ph; 09-424323584)
21. လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Store_Staff F(5)Posts
– Salary 160,000~200,000 Ks
– စနေနေ့ဝက်/ တနင်္ဂနွေ/ အစိုးရရုံးပိတ်ရက် ပိတ်
– Ferry(လှိုင်သာယာ/အင်းစိန်)/ Uniform ရှိ
– စိတ်ဝင်စားပါက (25.6.19)ရက် အင်္ဂါနေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Yu Yu Ph; 09-458315642)
22. လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ Car Service Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Customer_Service M(5) posts
– Exp (1) yr (Customer Service )
23. တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Marketing_Staff M(5) Posts
– Salary 150,000~200,000 Ks +++
24. တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ ပန်းအလှဆင်စင်တာကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Sale_Staf F(5)Posts
– Exp (1)yr (Sale Staff Field)
– စိတ်ဝင်စားပါက (27.6.19)ရက် ကြာသပတေးနေ့ နံနက် (10)နာရီတွင် အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Myo Myo Ph; 09-264692102)
25. ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ သဘောင်္ကုမ္ပဏီကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Mechanical_Drawing_Engineer M/F(10)posts
– Salary 150000~200000Ks+ Other Allowance
– AGTI (Mechanical)
– Auto CAD ကျွမ်းကျင်
← 2019-06-25 16:40:50 ,Guardian Bond Company Limited … 2019-06-25 16:41:31 ,#999Job #မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မြိ… →
2019-09-21 06:15:32 ,Consultant：NanTel: 09-89416880…
2019-09-21 06:15:26 ,